ခရိုနီ Crony ( တောကြောင် ခေတ်ပျက်သူဌေး ) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aung San/Aung San Suu Kyi » ခရိုနီ Crony ( တောကြောင် ခေတ်ပျက်သူဌေး )
ခရိုနီ Crony ( တောကြောင် ခေတ်ပျက်သူဌေး )
Posted by kai on Jan 17, 2013 in Aung San/Aung San Suu Kyi, Politics, Issues |9comments
အောက်မှာ.. ဒီရက်ပိုင်း” ဟော့”လာတဲ့. ခရိုနီနဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အကြောင်း.. ဆက်စပ်သတင်း/ဆောင်းပါးတွေစုပေးထားတယ်..
မေးလ်ဂရုက.. ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တချို့… စာတွေလည်း ကူးတင်ပေးထားတယ်..
ခရိုနီဆိုတဲ့..စာသားစကားက.. ယူအက်စ်သံရုံးကကြေးနန်းတွေ.. Wiki Leak ကပေါက်ပြီးမှ.. အဲဒီအသုံးကိုယူသုံးကြရင်းခေတ်စားသွားတာဖြစ်ပါတယ်..။
တောမီးလောင်တောကြောင် လက်ခမောင်းခတ်.. ဆိုပြီး.. တော်မီးလောင်လို့.. တောကောင်တွေ ပြာယာခတ်နေချိန်.. တောကြောင်က.. အကောင်ဗလောင်တွေ ၀ါးတီးဆွဲမလို့.. ပျော်တယ်ဆိုတာနဲ့တင်စားပြီး.. တိုင်းပြည်မတည်မငြိမ်..အစိုးမရချိန်တွေမှာ.. အချောင်နှိုက်တတ်သူတွေကို.. တောကြောင်နဲ့နှိုင်းခဲ့ကြတယ်..။
အဲဒါတွေက.. ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မဖြစ်ခင်..ဖြစ်ပြီး.. ဂျပန်ဝင်..အင်္ဂလိပ်ပြေး..အင်္ဂလိပ်ဝင်..ဂျပန်ထွက်.. မိအေး၂ခါနာနှစ်တွေခေတ်တွေမှာသုံးခဲ့ကြတဲ့..စာသားတွေပါ..။
ခရိုနီ..ခရိုပြာ..ခရိုဝါတွေနဲ့.. ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်..မြန်မာ့နိုင်ငံရေး.. ဒီချုပ်..စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေအကြောင်း… ဖတ်ကြည့်ကြစို့ရဲ့..
Written by ဒေါက်တာရန်မျိုးသိမ်း
Sunday, 13 January 2013 16:15
မြန်မာ့နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်၊ နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်အများစုနှင့် နိုင်ငံရေးသမား အများစုတို့သည် အလွန်နက်နဲ၊ ရှုပ်ထွေးသည့်အပြင်၊ တခါတရံ အလွန် နားလည်ရခက်သည်ဟုဆိုသော သက်ကြီးဝါကြီးတို့၏ စကားကို ကျွန်တော်တို့ မှတ်သားခဲ့ရသည်။ ယနေ့ခေတ်၊ ကျွန်တော်တို့ လူလတ်ပိုင်း အရွယ်ရောက်သော အချိန်တိုင်အောင် နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်၊ ခေါင်းဆောင်အများစုနှင့် နိုင်ငံရေးသမား အများစုတို့သည် ရှုပ်ထွေးနေဆဲ၊ နားလည်ရန် ခက်ခဲနေဆဲဖြစ်သည်။
၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဇန်န၀ါရီလ (၉) ရက်နေ့၊ ပထမအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ ဆဌမအစည်းအဝေး၊ ပထမနေ့၊ နေ့လည်ပိုင်း အစည်းအဝေး ခေတ္တရပ်နားချိန်တွင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဌနှင့် ကော့မှူးမြို့နယ်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် သတင်းမီဒီယာများနှင့် နွေးနွေးထွေးထွေး တွေ့ဆုံစကားပြောရင်း လဘက်ရည်ဝိုင်းဖွဲ့ခဲ့သည်။ အဆိုပါ နွေးထွေးသော လဘက်ရည်ဝိုင်းသည် သတင်းထောက်တစ်ဦး၏ ခရိုနီများနှင့် ပတ်သက်သော မေးခွန်းကြောင့် ပိုမိုသက်ဝင် လှုပ်ရှားလာခဲ့သည်ဟု ဆိုနိုင်သည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က နိုင်ငံရေးလုပ်ရာတွင် အာဃာတကို အခြေခံပြီး၊ လုပ်သည်ကို မကြိုက်ကြောင်း ဦးစွာ ပြောကြားခဲ့သည်။ အကယ်စင်စစ်၊ မကျေနပ်မှု၊ ဖိနှိပ်ခံရမှု၊ မတရားခံရမှု၊ နှိပ်စက်ခံရမှုတို့ကြောင့် အာဃာတဖြစ်ပြီး၊ အာဃာတကြောင့် မသင့်မမြတ် ဖြစ်ကြရသည်။ အာဃာတသည် အကြောင်းမဲ့ ဖြစ်လာခြင်းမဟုတ်။ ထို့ကြောင့် ဖြစ်ရသည့် အကြောင်းများကို ချေဖျက်မှ၊ အာဃာတလည်း ပျောက်မည်ဖြစ်သည်။ လတ်တလော ခရိုနီများကိစ္စကို ကြည့်လျင်၊ မြန်မာနိုင်ငံတွင် လှည်းနေလှေအောင်း မြင်းဇောင်းမကျန် လူအတော်များများက မည်သူတို့သည် ခရိုနီကြီးများဖြစ်သည်ကို ကောင်းကောင်း သိကြသည်။ ထိုခရိုကြီးများအနေဖြင့်၊ အများပြည်သူအနေဖြင့်၊ အာဃာတ ဖြစ်စေခဲ့ရသော အကြောင်းများကို ဦးစွာ အထုပ်ဖြေ၊ ရှင်းပြခြင်းသည် အကောင်းဆုံး အာဃာတ ဖြေဖျောက်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု သုံးသပ်မိသည်။
စကားမစပ်၊ လက်ရှိမြန်မာ့နိုင်ငံရေး ပတ်ဝန်းကျင်တွင်လည်း အာဃာတကို ဘေးဖယ်ထားသည့်မူ၊ လမ်းစဉ်တို့ကို ကိုင်စွဲဆောင်ရွက်မည်ဆိုလျင် ကောင်းလေစွဟု မြည်တွန်တောက်တီးမိသည်။ ပြည်တွင်း နိုင်ငံရေးပါတီများနှင့် ဒီမိုကရက်တစ်အင်အားစုများ အကြားတွင် မျက်နှာချင်းဆိုင် စကားမပြောနိုင်သည်မှာလည်း ထိုအာဃာတကြောင့်ပင် ဖြစ်သည်ဟု ကောက်ချက်ပြုနိုင်သည်။ ပြည်နယ်များ၏ လက်ရှိနိုင်ငံရေး အနေအထားကို ကြည့်လျင်၊ အာဃာတတရားများကို ဘေးဖယ်ထားပြီး၊ အတူလက်တွဲ အလုပ်လုပ်နေကြသည်မှာ အားရစရာဖြစ်သည်။ ပြည်နယ်တစ်ခုအတွင်းရှိ တိုင်းရင်းသားပါတီများ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရေး၊ တစ်ပါတီတည်း ပြင်ဆင် ဖွဲ့စည်းနိုင်ရေးတို့အတွက် ဆွေးနွေးမှုများသည် အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ခရီးပေါက်နေပြီဖြစ်သည်။ သို့သော် တဖက်တွင်၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်သည် အခြားနိုင်ငံရေးပါတီများ၊ ဒီမိုကရက်တစ် အဖွဲ့အစည်းများ၊ တိုင်းရင်းသားပါတီများနှင့် နားလည်မှု၊ ယုံကြည်မှု တည်ဆောက်ရေးအတွက် အလုပ်သဘောဆွေးနွေးမှုများ၊ အစည်းအဝေးများကို ယနေ့အထိ ပုံမှန်ပြုလုပ်နိုင်မှု မရှိခြင်းအပေါ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နှုတ်ထွက်မိန့်ကြားသည့် အာဃာတမဲ့ မူဝါဒအပေါ် အခြေပြု၊ သုံးသပ် ဆင်ခြင်နိုင်မည်ဆိုလျင် အလွန်ကောင်းလေစွဟု ထပ်မံကောက်ချက်ပြုမိပါသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ခရိုနီအမျိုးမျိုးရှိကြောင်း၊ ခရိုနီဟုခေါ်ရသည်မှာ န၀တ၊ နအဖခေတ်တွင် ချမ်းသာလာကြသူများကို ခေါ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ခရိုနီများ ချမ်းသာလာကြပုံများသည် မတူညီကြကြောင်း၊ ချမ်းသာပုံ ချမ်းသားနည်းတွင် မတရားမှုများ ပါ၊ မပါကို စိစစ်ရမှာဖြစ်ကြောင်း၊ မည်သူဖြစ်ဖြစ် ပြစ်မှုမထင်ရှားသရွေ့ အပြစ်မဲ့သည်ဟု သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာမောင်းခတ်ခဲ့သည်။ ခရိုနီကြီးတို့ ခုန်ပေါက် ပျော်မြူးကြသည့်အချိန်တွင် ပြည်သူလူထုကြီးက ဆင်းရဲတွင်း နက်နေဆဲဖြစ်သည်။ ပြည်သူလူထုကို ဆင်းရဲတွင်းနက်အောင် လုပ်ခဲ့ရာတွင် အဓိကနေရာမှ ပါခဲ့သည့် ခရိုနီများကို သက်သေအထောက်အထား မရှိသဖြင့် အပြစ်မှ ကွင်းလုံးကျွတ် လွတ်စေဟု တစ်ချက်လွှတ် အမိန့်ချလိုက်ခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ အကယ်စင်စစ်၊ မြန်မာပြည် တနံတလျားမှ ပြည်သူလူထု အများစုကြီးသည် အာဏာပိုင်များနှင့် လက်ဝါးချင်းရိုက်ပြီး၊ မတရား ချမ်းသာကြွယ်ဝလာသော ခရိုနီများအကြောင်းကို ဘ၀နှင့်ရင်း၊ တွေ့ကြုံခဲ့ရ၊ တွေ့ကြုံနေရသဖြင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ထက် များစွာ နားလည် သဘောပေါက်ပြီးဖြစ်သည်ဟု သုံးသပ်နိုင်သည်။ အပြစ်ရှာမရအောင် လုပ်နိုင်သည့် အခြေအနေများ၊ ပံ့ပိုးမည့်သူများ၊ အင်နှင့်အားနှင့် ရှိနေချိန်တွင် ဘယ်ခရိုနီကြီးကို ပြစ်မှုထင်ရှားကြောင်း ပြနိုင်ပါမည်နည်း။ အခြေအနေအရ၊ ပြစ်မှုထင်ရှားအောင် မပြနိုင်လင့်ကစား၊ အများပြည်သူ၏ နှလုံးသားတွင် မည်သူတို့သည် ခရိုနီကြီးများ ဖြစ်သည်ကို သံမှိုဆွဲထားပြီးဖြစ်သည်။
၁၁၊ ဇန်န၀ါရီ၊ ၂၀၁၃
ကျုပ်တို့နိုင်ငံ ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှ မတိုးတက်နိုင်ဘာဘူး ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ မသူတော်တွေ ကောင်းစားနေတာရယ်၊ ခရိုနီတွေကို ကျေးဇူးရှင်လို့ လက္ခံထားတာရယ်၊ ပြည်ပကနေ ပြည်တွင်းကပြည်သူအပေါင်းရဲ့ ဒုက္ခတွေကိုရောင်းစားပြီ ချမ်သားလာခဲ့တဲ့ NGO ခရိုနီတွေက လုပ်စားနိုင်ငံရေးအတွက် နိုင်ငံရေးခုံဝယ်တာကို အစိုးရနဲ့အခြားသော နိုင်ငံရေးပါတီတွေက လက်ခံနေတာတွေက ကျုပ်ပြောတဲ့ ကျုပ်တို့နိုင်ငံ ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှ မတိုးတက်နိုင်ဘာဘူးဆိုတဲ့ အကြောင်းရင်းတွေသာဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်မကောင်းစရာကတော့ ကျုပ်တို့ပြည်သူတွေအတွက်ပါ၊ သနားဖို့အလွန်ကောင်းဆုံးကတော့ ကျုပ်တို့ပြည်သူတွေပါ။ တိုင်းပြည်နဲ့ပြည်သူတွေအတွက်တော့ အားလုံးအတွက် အမုန်းခံပြီပြောရအုံးမယ် မကြိုက်ရင်လဲ ကြိုက်တဲ့နည်းနဲ့တုံပြန်နိုင်တယ် အမှန်တရားဖက်မှာ ရပ်တည်ရတာကိုဘဲ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဂုဏ်ယူတယ်။
ကျနော့် ခံယူချက်ကြောင့် လိုအပ်လာတဲ့ သူများ-နိုင်ငံရပ်ခြားက ထောက်ပံ့တဲ့ ပိုက်ဆံနဲ့ 8888 တော်လှန်ရေးလုပ်လာတာ ၂၆-နှစ်ရှိပြီ–လို့ ပြောရင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဆန်းစစ်ရဲသူတွေသာ သိပါလိမ့်မယ်–။ အဲလိုပဲ မြန်မာပြည်ရဲ့ မြေကြီးအောက် ချမ်းသာမှုကို ဖေါ်ထုတ်ခဲ့သူတွေက ခရိုနီတွေက သေနတ်မကိုင်ရုံတမယ် အုပ်ချုပ်လာတာလဲ ၂၆-နှစ် ရှိပါပြီ–။ ကျနော်တို့တတွေ တပြေးထဲပြေးအောင် လုပ်ခဲ့သူတွေကလည်း မြန်မာပြည်ရဲ့ သံယံဇာတနဲ့ ချမ်းသာနေတာ အဆန်းမဟုတ်ပါဘူး–။ ဒီကြားထဲ နိုင်ငံခြားသား ခံယူထားသူတွေကလည်း မနည်းတော့ဘူး မဟုတ်လား–။ ဒေါ်စု နေတဲ့ ခြံကို အမွေ ၀င်လုတဲ့ အစ်ကိုဖြစ်သူ နိုင်ငံခြားသား ခံယူထားသူလိုတော့ မငြီးတွားကြစတမ်းပါ–။ ဒါပေမဲ့–အမေရိကန်နိုင်ငံရေးမှာကော ကျနော်တို့တတွေ ဘယ်လောက် ၀င်ပါခဲ့ကြလို့လဲ–။ ပရိုပိုဆယ် တောင်းတတ်တာကလည်း ပညာတပါးပါပဲ–။
တကယ်တော့ ကျနော်တို့တတွေ မနာလိုဝန်တိုမှုတွေကို မှန်နဲ့ ပြန်ကြည့်–ရိုးသားရင်းအမှန်နဲ့ မြန်မာပြည်ကို တည့်တည့် ပြန်ကြည့်တတ်အောင် ကျိုးစားကြဖို့တော့ လိုလိမ့်အုံးမယ်–။ ပိုက်ဆံချမ်းသာပြီး မေတ္တာတရားခေါင်းပါးသူတွေ မြန်မာပြည်မှာ အများကြီး ရှိတယ်–အဲဒီသူတွေကို ခရိုနီလို့ ခေါ်တယ်–။ ဒီတော့ ခရိုနီနဲ့ ပရိုပိုဆယ် ဘာကွာသလဲ–။ စေ့စေ့ကြည့်တတ်ဖို့တော့ လိုမယ်–။
ကြမ်းခင်းဈေးကတော့ –မြန်မာပြည် အနယ်နယ်အရပ်ရပ်ကနေ နိုင်ငံခြား ရောက်လာပြီး မြန်မာပြည် အနယ်နယ်အရပ်ရပ်မှာ ကျနော်–ခင်ဗျား မပါပဲ ၂၆-နှစ်တာ ဖုတ်လှိုက်ဖုတ်လှိုက် ဖွဲ့စည်း ရပ်တည်ခဲ့တဲ့ ကြံ့ကြံ့ခံခဲ့တဲ့ အဖွဲ့ချုပ်ကို သင် ဘယ်လောက် ကူညီခဲ့သလဲ-ဒေါ်စုကို ရိုးမယ်ဖွဲ့ သစ်ပင်ထိပ်ကို မိုကြိုးပစ်ဖို့ မကြံပဲ သင်ဘယ်လို-ကူညီနိုင်မလဲ ဆိုတာပဲ ရှိပါတယ်–။ ဒီမိုကရေစီတော်လှန်ရေးသမား ခင်ဗျား ကြီးပြင်းလာတဲ့ မြို့ကို ကျနော် သိစရာ မလိုပါ–ခင်ဗျားနယ်သားတွေက သိကြပါတယ်–။ နောက်ကျတယ်တော့ မရှိဘူး ထင်တာပါပဲ–
About the Crony;
# DASSK’s philosophy is more practical. She can enter into the program which is behind the window. There is no doer, only doing; no feeler only feeling in the universes. According to the Law of Kamma, every moment of mental life is counted. Let’s say; you are angry. When your anger is strong, you can not stop it right away. But you can drive your anger with your wisdom to not destroy yourself and the others. Depend on the power of the wisdom, you can control them. But without your wisdom, trying to stop the anger with other different ways are going to the destroying something only; may be yourself or may be the others.
Therefore, we need both to eliminate the crony in our Nation, since we don’t have enough wisdom to stop them. It is the same as; Meditation and Dutin go together to clean up our stupid mind energies.
DASSK’s philosophy is the same with meditation practice. U Win Tin and the others’ philosophy are the same as Dutin practices.
Happy Karen New Year!
Saw Pyi Thein
By Francis Wade Jan 15, 2013 1:25PM UTC
Aung San Suu Kyi. Maybe not as squeaky clean as people had hoped. Pic: AP.
A very interesting piece ran in The Times (UK) today under the headline, ‘Suu Kyi under fire for taking money from cronies of the former regime’. The paper cited sources from her National League for Democracy (NLD) party who admitted to “receiving hundreds of thousands of pounds from companies owned by the reviled bosses”, who reportedly include Tay Za and Zaw Zaw, two of the country’s most notorious tycoons.
According toarecent Irrawaddy article, the Tay Za-owned conglomerate, Htoo Trading, donated $82,353 to NLD education and health initiaves. Suu Kyi responded to the criticism by saying that the businessmen had contributed toagood cause. “What is wrong with that? … People may have become rich in different ways. What must be investigated is whether they were involved in any illegal action to make themselves rich,” she said.
That final statement isabizarre one for her to make, given the notoriety of the cronies. A US cable from 2009 states: “Rumors abound that Tay Za has long smuggled Chinese weapons into Burma via his aviation and trading businesses.” Another donor, Kyaw Win, who gave $158,824 to the NLD via his subsidiary company Sky Net, is closely linked with recent land confiscations, while Zaw Zaw, like the rest, had been under US and EU sanctions (the magnate’s Max Myanmar consortium is one of Burma’s biggest, and helped build the new capital Naypyidaw). Considering the backgrounds of the donors, the money may well be tainted.
Suu Kyi is believed to have met with both Tay Za and Zaw Zaw several times between her release from house arrest and election to parliament in April 2012, although it is unclear what the nature of the meetings was. The NLD has not revealed whether it probed how each donor generated the funds.
Prior to becomingapolitician, the opposition icon had long supported sanctions against the former junta and its cronies who dominate the economy. Ina1997 interview she said: “Unless there is free and fair competition, there can’t be healthy economic development. And what we have in Burma now is not an open-market economy that allows free and fair competition, butaform of colonialism makesafew people very, very wealthy. It’s what you would call crony capitalism.”
The use of Tay Za’s donations are particularly irksome, considering the relationship between Burma’s military and the opposition. As well as the alleged procurement of Chinese weapons, his Myanmar Avia Company is thought to have close business ties with Russia’s major state-owned military aircraft manufacturer, MAPO. “Opposition groups and military analysts say Tay Za’s position at Avia Export made him instrumental in the military’s purchase in 2001 of 10 MiG 29 jet fighters valued at US$130 million,” said Asia Times in 2008.
Atatime when the Burmese military is using air strikes on Kachin army positions in the north, and yesterday’s shelling of the town of Laiza, which killed three civilians, Suu Kyi’s attempts to shrug off the controversy will grate. DuringaUK parliamentary session yesterday on the attacks in Kachin state, an MP said that “the planes [used by Burmese army] are of Chinese origin and the gunships are Russian.”
The Nobel Peace Laureate has been criticized for failing to speak out on behalf of the Kachin, and her recent statements on cronies (“Give themachance to reform”) and the military (“I haveasoft spot for the army”) won’t help. Benedict Rogers, from Christian Solidarity Worldwide, thinks the revelations “disappointing for many who viewed her asamoral leader in the mould of Gandhi or Martin Luther King.”
A feeling is growing that the democracy icon is treading on increasingly thin ice – she has refused to condemn army assaults in Kachin state, and speak out on the ethno-religious crisis in Arakan state. She would do well to really tackle head on the recent criticism she has received, rather than the high-handed responses she is increasingly deploying to answer critics.
ဒီပိုက်ဆံတွေ လက်ခံလိုက်တာ စိတ်မကောင်းမိတဲ့ ထဲမှာ ကျွန်တော်လည်း ပါပါတယ် ။
ဘယ်လောက်ဘဲ ကောင်းတဲ့ရည်ရွယ်ချက်လို့ ပြောပြော NLD နံမည် ၀င်မခံသင့်ပါဘူး ။ NLD ပိုက်ဆံ မရှိလို့ မလှုနိုင်တာ မလုပ်နိုင်တာကို နားလည် ခွင့်လွတ်နိုင်ပေမဲ့ သူတို့ဆီက ပိုက်ဆံ လက်ခံ ရယူပြီး လုပ်တာကို တော့ နားမလည်နိုင်ပါဘူး ။
ထူး မှာ ထူး ဖောင်ဒေးရှင်းဆိုတာ ရှိပါတယ် ။ ဒေါ်စု အနေနဲ့ သူတို့ ပိုက်ဆံတွေ နဲ့ ပြည်သူတွေဆီ ရောက်စေခြင်ရင် ထူးဖောင်ဒေးရှင်း ကနေဘဲ ဒီနေရာ ဒီနေရာ တွေ မှာ ပိုက်ဆံလို အပ်နေတဲ့ အတွက် ကူညီပေးလိုက်ပါလို့ သာ ပြောသင့်တယ် ထင်ပါကြောင်း ။
ဒါပေမဲ့ မြန်မာပြည် အနေနဲ့လည်း အားကိုးစရာဆိုလို ဒေါ်စုသာ ရှိလို့ စိတ်မကောင်းစွာ နဲ့ဘဲ လက်ခံလိုက်ရပါကြောင်း ။ ဘာမှ မလုပ်ရင် ဘာမှ အမှားမရှိဘူး ။ လုပ်ရင်တော့ အမှားရှိမှာဘဲ ဆိုတာ နဲ့ ဖြေသိမ့်မိပါကြောင်း …
ကျမသာဆို ယူမှာ လက်ခံမှာပဲ ကိုထူးဆန်း ( ဒါက အမေစု လုပ်သမျှကို ဘာမဆို မျက်စိစုံမှိတ်လက်သင့်ခံချင်တဲ့ စိတ်ကြောင့် လုံးဝ မဟုတ်ဖူးနော်)
အဲ့ဒီ လူတွေ မှာ ဖောင်ဒေးရှင်းတွေ ရှိပေမဲ့ တကယ်လိုအပ်သူကို ကူညီတာရော ဟုတ်ရဲ့လား ဟန်ပြရှိနေတာလည်း ဖြစ်နိုင်တာပဲ
ပြောရမယ်ဆို သူတို့က လှူတယ်သာ ပြောတာ တကယ်ဆို သူတို့ ပိုင်ဆိုင်သမျှ အားလုံး ဟာ ကျမတို့ ပြည်သူတွေ ဆီက ဂုတ်သွေးစုပ်ထားတာ ချည်းပဲ လေ။ ကျမတို့ ပြည်သူတွေ အားလုံးနဲ့ ဆိုင်တယ် ။ အမြင်မှန်ရလို့ စိတ်ကောင်းဝင်သွားရင် သူတို့ ရှိတဲ့ စည်းစိမ်တောင် အကုန်ပုံပြီး လှူသင့်တာ ။
ဒါကြောင့်မို့ အဲ့ဒီ ပိုက်ဆံကို လိုအပ်တဲ့နေရာ လာ ပေးတာ လက်ခံရမှာပေါ့ ။ နောက်တခုက သုံးတတ်ရင် ခရိုနီလည်း နိုင်ငံရေးမှာ အသုံးတည့်ပါတယ်။ အရင်က ဂျော့ဘုရ်ှလည်း စစ်လက်နက်ထုတ်တဲ့ ကမ်ပနီတွေက ထောက်ခံအားပေးထားတဲ့ အခါ စစ်မျက်နှာ ဖွင့်ပြီး လက်နက်ဖြုန်းပေးခဲ့တယ်လေ။
သူတို့ကတော့ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုထားပြီး လူကြားကောင်းအောင် အဆင်ထုတ် လုပ်နိုင် လုပ်တတ်တယ်။
ဒီမှာကတော့ ဒဲ့မြင်ရတာကို ဒဲ့တွေးပြီး ဒဲ့ပြောကြတယ်။
တရုတ်အရေးအတွက် ခရိုနီတယောက်ကို နားချနိုင်တော့လည်း ကျမတို့ ပြည်သူတွေအတွက် အကျိုးများနိုင်ပါတယ် ဒီလို ပြောလို့ ခရိုနီကို အားပေး အဖေခေါ်ချင်နေတယ်တော့ မအောင်းမေ့ပါနဲ့
ဒင်းတို့ကို အသွေးထဲ အသားထဲ စိမ့်နေအောင် မုန်းတီးပါတယ် သို့သော်နိုင်ငံရေးမှာ ဗျူဟာမြောက်အတွေး အလှည့်လေးတွေ ရှိပါတယ်
ကျမစိတ်ထင်တာပြောရရင် တေဇက တဖြည်းဖြည်း ကံဆုတ်လာသလိုပါပဲ ။ ပထမ နှင်းတောင်ထဲ လေယာဉ်ပျက်ပြီး ကံကောင်းလို့ မသေတယ်။ နောက်အခု သူပိုင် လေယာဉ် ပျက်ကြပြန်တယ်။
ဆိုတော့ လူဆိုတာ တသက်လုံး တလမ်းတည်းတော့ မသွားဘူး နေ၀င်ချိန်ဆိုတာ ရှိတယ် နေမ၀င်ခင် အတွေးမှန် အမြင်မှန်ရှိလာဖို့ပဲ လိုတယ်။
အခု ဦးသန်းရွှေ တပ်ဆုတ်ပေးသွားသလိုပေါ့ ( သူပေး လို့ ရခဲ့တယ်ပဲ အောင်းမေ့တယ်)
ခေတ်ပျက်လက်ကျန်ကတော့ အလွန် ဆိုးရွားစွာကျန်နေခဲ့တာပေါ့လေ
ခုလို စပ်ကူးမတ်ကူးကာလ အပြောင်းလဲ ခေတ်မှာ လူလာဖြစ်တဲ့ ကျမတို့ ( ခေတ်ပျက်ပြည်သား) တွေ အနေနဲ့ တော့ ဒီခေတ်ရဲ့ ခေတ်ကောင်းကို မြင်ရဖို့ အခွင့်ရေးနည်းပါတယ် နောက်တက် အနာဂတ်တွေ စံဖို့ ကျမတို့ တွေ အစမ်းသပ်ခံ ပြောင်းလဲကြဖို့ ကျင့်သားရဖို့ စနစ်ကောင်းတခု ရဖို့ လုပ်နေ ပြောနေ သွားနေကြတယ်ပဲ မှတ်ပါတယ်
ကရဲစည် စကားငှားပြောရရင် ကျမတို့ ခေတ်ပျက်လူသားတွေ လက်ကျန်လူသားတွေ သေပေးရုံနဲ့ တိုင်းပြည်မှ ကောင်းမလာနိုင်တာ ။ ဒီလိုပဲ အော်လိုက်ဟစ်လိုက် ဒရွတ်ဆွဲလိုက် ငိုလိုက် ရီလိုက်သွားရမှာပါ ။
ကိုယ်တိုင်လည်း ခေတ်ကောင်းကို မမြင်နိုင်တော့ပါဘူးလေလို့ စိတ်လျှော့လိုက်တာ သိပ်မကြာသေးဘူး နောက်လူအတွက်ပဲ မျှော်လင့်ပါတော့တယ်
အိုဝဲလ်ရဲ့၁၉၈၄ စာအုပ်ထဲမှာ ရေးထာတာကတော့
နောက်ဆုံးစာကြောင်းကို ဖတ်မိတော့ ကျမတို့ဆီက ဆန္ဒပြပွဲတွေကို သတိရမိလို့ တစိမ့်စိမ့်တွေးပြီး ရီမိတယ် မပြုံးကောင်းမှုနဲ့ ဒီလို နိုင်ငံရေး သရော်စာကို ဖတ်ရတယ် အောင်းမေ့တယ်
ခုရက်တော့ ဒါကို ပြောဖြစ်နေကြတယ်ထင်တယ်။ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ဒီနေ့ မောင်ဒင်္ဂါး FB status မှာ တွေ့မိလို့ သဘောကျလိုက်သေး။ :hee: သာမန်ချိန်တော့ သူ့ အပြော မျက်နှာကျောမတည့်။
ဟင်! ကော်မန့် အပြည့်မပါဘူး။
“””တချိန်က ဒေါ်စုဒေါ်စုနဲ့။ ခုများ လက်ပံတောင်းစုံစစ်ကော် ဥက္ကဌလုပ်ပြ်ိးဖြေရှင်းပေးမယ်ဆိုတာတောင် ဖုတ်လေတဲ့ငပိရှိတယ်မထင်တဲ့ အလား။ ဟိုက တရုတ်နဲ့ ဆက်ဆံရေးရေရှည်ကို မျှော်မြင်ပြီးသတိပေးတာ။ တရုတ်နဲ့နယ်ချင်းစပ်နေတဲ့ ပြည်နယ်၂ခုမှာ စစ်မီးလောင်တဲ့ အထိ အညွန်းတွေပြနေတာအထိကို မမြင်တတ်ကြဘူး။
ခရိုနီနဲ့ ဆက်ဆံရေးပြေလည်တယ်ဆိုပြီး ကဲ့ရဲ့ဆိုကြတယ်။ မှန်ပါတယ် ခရိုနီတွေရဲ့ပိုက်ဆံတွေက မတရားရထားတာ။ ဒါပေမယ့် ဘယ်နည်းလမ်းတွေနဲ့ ပြန်ချွေယူမလဲဆိုတာကလဲ ရှိသေးသပေါ့။ ဒေါ်စုလိုလူက ခဗျားတို့ ကျုပ်တို့လို လမ်းဘေးအထာနဲ့ ရိုက်ဟလုဟ လုပ်ရိုးလား။ နည်းပေါင်းစုံရှိတဲ့ထဲက လွယ်ကူညင်သာပြီး အဆင်ပြေဆုံးနည်းလမ်းတွေ ချသုံးနေတယ်မြင်တာပါပဲ။””” (မောင်ဒင်္ဂါး)
Pooch ပြောတာကို အင်မတန်သဘောကျပါတယ်။
ကျွန်မ Personal အတွေးကို ပြောရရင်
အဲဒီ ခေတ်ပျက်သူဌေး တွေထဲ မှာ နလပိန်းတုံး ဖွတ်ဦးနှောက် မဟုတ်တဲ့ အတော်ထက်မြက် တဲ့ အသိဉာဏ်ရှိသူတွေပါတယ်။
အဲဒီ လူတွေ ကလဲ နိုင်ငံကို ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်အောင် ပို့ခဲ့ တဲ့သူ တွေ ထဲ က တစ်ချို့ ပါလို့ ကျွန်မ ပြောရင် ကျွန်မကို ဝိုင်းပြီး ကလော်တုတ်ကြမယ်။
ဒါပေမဲ့ အဲဒါ ရာနှုန်းပြည့်မမှန် ရင်တောင်မှ မှန်သင့်သလောက်မှန်မယ်။
ဖွတ်ဦးနှောက်တွေ ကများနေလို့ နိုင်ငံက ဆိုးသည်ထက်ဆိုးလာတာ။
ဒီတော့ ဒီလို ထက်မြက် တဲ့ သူတွေ ကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လဲ မြင်မှာပါဘဲ။
ဒီလို လူတွေဟာ နိုင်ငံကောင်းဖို့ တကယ်ဘဲ အထောက်အပံ့ ဖြစ်ရင် ကျွန်မတို့ သူတို့ကို ဘာလို့ လက်မခံနိုင်ရမှာလဲ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် က ပညာရှိတာအပြင် တိုင်းပြည်အပေါ် စိတ်စေတနာကောင်းတာ မို့ ကျွန်မ တော့ သူ့ကို ယုံပါတယ်။
သူ့လုပ်ရပ်တွေ ထဲမှာ မှားတယ်လို့ ပြောတာတွေ ကတောင် ကျွန်မတို့ လက်တွေ့ဘဝ တွေမှာ အတုယူသင့်တာတွေ အများကြီးပါဘဲ။
ကျွန်မ သူ့ကို ချစ်တဲ့ စိတ်ကြောင့် သူဘာလုပ်လုပ် အမှန်လို့ မပြောပါဘူး။
ဒါပေမဲ့ အခုအထိတော့ သူမှားတာ မမြင်ပါဘူး။
ကျွန်မတို့ မမြင်နိုင်တဲ့ အမှောင်ထဲမှာ စမ်းသွားနေရတာပါ။
အားလုံး ညီညွတ်ပြီး လက်ချင်းတွဲထားရမှာ အပြင် ကျွန်မတို့ ကို ပံ့ပိုးပေးမဲ့ သူတွေ ကိုလဲ ရှာပြီး ပူးပေါင်းရမှာ အသေအချာပါဘဲ။
တစ်ချို့ က ကျွန်မတို့ မမြင်နိုင်တာတွေ ကို မြင်နေပြီးသား မဟုတ်လား။
သူတို့ကို ကိုယ်နဲ့ ပေါင်းလာဖို့ စည်းရုံးနိုင်ဖို့ပါဘဲ။
အဲဒါကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လုပ်နေတာလို့ မြင်မိပါတယ်။
သူက ကျွန်မ အထင်ကြီးမိတာထက်ကို ပိုပိုပြီး အထင်ကြီးဖို့ ကောင်းတာကို သိသိလာတာတော့ အသေအချာပါဘဲ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကျန်းမာဖို့ အတွက်သာ ကျွန်မတို့ ဆုတောင်းကြရမှာပါ။
Ko Pi Ti ရော့ ကျန်တာမင်းတို့ စားကြတော့ ဆိုပြီး အခွံချည်း ပေးသွားတာ။
ZawYe DoneDone DineDine ဥာဏ်ကောင်းတယ် အဲ့လို Receipt က ပိုက်ဆံလွှဲတဲ့သူတွေတိုင်းကို သက်သေခံအဖြစ်ပေးရတာ မဟုတ်ဘူးလား @.@
Zaw Win Naing အေးလေ လွှဲတဲ့လူတိုင်းရတာကိုး
Shwe Zin ငွေပေးရသူ က တင်ပေးလိုက်တာလား
Mark Myat လွှတ်တော်မှာ အရေးကြီးအဆိုတင်သွင်းပြီး ကော်မရှင်ဖွဲ့ စုံစမ်းသင့်တယ်ထင်တယ်
Yoe Myay ဘဏ်နဲ့မဆိုင် ပါ၊ငွေလွှဲတဲ့လူတိုင်းရတာပါ။မဆိုင် တာမဖွကြပါနဲ့။
Nyein Ko WOW!
Phyo Aung Wai ဘဏ်ကဘယ်သူမှအဲစာရွက်မရှိဘူး…ငွေလွှဲသူပဲရတာ…
Hanzaw Thet Stupid!!
Tabarwa Yintwenge ..နောက်လာတဲ့လူဒီထက်မဆိုးချင်ရင်..လွတ်တော်ကိုယ်စားလယ်တွေကိုပိုင်ဆိုင်မှုတွေကြေငြာခိုင်းလိုက်ပါ….
Ko NyiNyi ဒု ၀န်ကြီးဦးသောင်းတင်ကိုခန့်ထားလိုက်
Saw Win Naung Naung ဘဏ်နဲ့ မဆိုင်ပါ ငွေလွဲပေးရသူကိုယ်တိုင်ဘညွှန့်လုပ်ခြင်းဖြဖစ်နိုင်ပါသည်
Tetnay Oo THAT IS RIGHT!!!!!
Kyaw Winmyint သောင်းတင်လာတော့ဘာထူးမှာလဲ။kmdချမ်းသာဖို့လား။
Tin Soe ခုထိ သူပြောတဲ့ငါးထောင် တန် ဖုံး မရသေးဘူး
အန်တီ မြတ် အခုမှတင်တာ သူထိန်းသင့်တယ်ထင်လို့ ထိန်းသိမ်းထားလို့ပေါ့..။ သူ့ဆီမှာရှိတာ ကြာပြီနေမှာပါ..။
Mg Mg Aung ဟ….ငွေလွဲရင် Receipt ပေးတာပဲလေ။
Fuji San အေးလေ ဒါတောင်သိဘူးလား
Soe Myat Aung ဦးသောင်းတင်ဝင်ပြီးမှ ထူးလာတာတွေကို ဇန်န၀ါရီလ ကွန်ပျူတာဂျာနယ်မှာ ဖတ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
Thander Auung bank မှာငွေလွှဲတဲ့သူတိုင်းကို အဲလိုဖြတ်ပိုင်းပြန်ပေးတာ လူတိုင်းသိတယ် ဒါ bank ကတင်တာမဟုတ်ဘူး
Eugena Yzt သေချာတာတခုကတော့အခုတလော kbzကိုအကြောင်းမဲ့ထိုးနက်နေသလိုဘဲ
Thander Auung ဟုတ်တယ် မဆိုင်လဲဆွဲထဲ့နေသလိုဘဲ
Lupas Aung The sender mentioned on the TT slip called U Thein Win is the ex-chief engineer of mobile dept, MPT. My question is, where has he got that much of money? Why did he transfer money to U Thein Tun? We don’t know whether U Thein Tun is the minister of MPT…See More
Nyinyi Palaw jame mint တော်တော် ရွှေဥာဏ်တော်စူးရောက် ပါပေတယ် အေးချမ်းမွန် ကတော့ သူခိုးလက်ခံ ဘဲ
မြန်မာပြည်မှာ.. ခေတ်ပျက်တုံး(စစ်အစိုးရအုပ်ချုပ်တုံး) သယံဇာတနဲ့.. လိုင်စင်/ပါမစ်နဲ့ အထူးအခွင့်အရေးကို.. ငွေပေး.. ရှယ်ယာပေးပြီး.. ချမ်းသာသွားသူတွေအများကြီးပါ..
ဒီခေတ်မလဲ.. ရှိတာပဲ..။ နည်းပြောင်းလုပ်တာပဲရှိမယ်..။ “ခရိုပန်းရောင်”လောက်လုပ်တဲ့သူတွေအများကြီးပါ..။
ယူအက်စ်မှာတော့.. ခရိုနီတွေက.. လိုင်စင်..အထူးအခွင့်ရအောင်.. အစိုးရ(အိမ်ဖြူ).. လွှတ်တော်အမတ်တွေဆီ.. လော့ဘီလုပ်ကြတယ်..
မြန်မာပြည်မှာ. ငွေချမ်းသာတဲ့.ခရိုနီတွေ.. လူထုကို.. သူတို့ကြွယ်ဝမှုတွေကို.. ဘယ်နည်းနဲ့.ငွေပြန်ရှယ်ရှယ်.. ဒီချုပ်လှူလှူ. .. ဟယ်လီကော့်ပတာပေါ်က ကြဲချချ .. လုပ်ကောင်းလုပ်သင့်..လုပ်ထိုက်တဲ့အလုပ်လို့..ထင်ကြောင်း…
လှူကြဖို့.. လုပ်ကြဖို့.. ထပ်လုပ်ကြဖို့.. တိုက်တွန်းရမှာဖြစ်ကြောင်း… ရယ်လို့..
မြန်မာပြည်က.. မဆလရဲ့.. မြန်မာ့နည်းမြန်မာ့ဟန်ဆိုရှယ်လစ်ကျိန်စာကြီးမိပြီး.. သူဌေးကို.. အပြစ်မြင်ကြတယ်..။ ငွေကြေးချမ်းသာသူကို.. မတရားပြောကြတယ်..။ အရင်းရှင်..အမြတ်ကြီးစာ.. ဘာညာနဲ့..အတင်းတုတ်ကြတယ်..။
သူဌေး.. ငွေရှင်.. အရင်းရှင်ကို.. နှိမ်ချ..အပြစ်မြင်ကြတာဟာ.. အနာဂတ် တိုင်းပြည်မွဲကိန်းမှတ်ပါကြောင်း..။ :harr:
ကမ္ဘာအချမ်းသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ် ၀ရမ်ဘူဖေးတ်နဲ့.. ဂျော့ဆိုးရော့စ်( မြန်မာပြည်မှာ.. ၈၈ကျောင်းသားအုပ်စုကို တွေ့သွားသူ) တို့ကို.. ယူအက်စ်မှာ ခရိုနီလို့ခေါ်ကြပါကြောင်း..
Lobbying in the United States – Wikipedia, the free encyclopedia
Lobbying happens at every level of government, including federal, state, …. It is possible for one level of government to lobby another level; for example, the …
Sweet Deal: Sugar Lobby and Crony Capitalism …
Sweet Deal: Sugar Lobby and Crony Capitalism. Posted on April 24, 2012 by Nick Sorrentino. That spoonful of sugar you just dropped into your coffee costs …
The Latest Beneficiary of Obama’s Crony Capitalism: George Soros …
Jan 29, 2012 – Inapost last week, I noted that one of Obama’s favorite billionaires, Warren Buffett, stood to makeaboat load of money from Obama’s …
သဂျီး ပြောတတ်တာလေး ပြောပီးပဲ ထောက်ခံလိုက်တော့မယ်…
သခင်မျိုးဟေ့ … ဒိုဘာမင်န်
အောက်ကမြစ် တမင်ချန် ခဲ့တာ လား ကျန်ခဲ့တာလား ကိုဂီ…
ဒိုဘာမင်န် ဆို ဟို အကောင်ကြီးတွေ ပဲ ပြေးမြင်မိလို့…